Arduino MKR WAN 1300 uye Arduino MKR GSM 1400, iwo mabhodhi matsva eIOT kubva kuArduino Project | Mahara emahara
Arduino MKR WAN 1300 uye Arduino MKR GSM 1400, iwo mabhodhi matsva eIOT kubva kuArduino Project
Pakati peaya mazuva akakosha eMaker Fair egore akaitika muNew York. Yakanaka apo mapurojekiti anozivikanwa uye asingazivikanwe zvakanyanya aunza mapurojekiti avo nemidziyo yavo mitsva. Arduino anga aripowo paFair ichi uye apa mabhodi maviri matsva emhuri yeArduino.
Mahwendefa aya anozivikanwa se Arduino MKR WAN 1300 uye Arduino MKR GSM 1400. Mabhodhi madiki maviri akatarisana nenyika yeIoT uye izvo zvinonyatso batsira mushandisi kugadzira mapurojekiti akangwara kana kumbotora chikamu muInternet yezvinhu.
MKR WAN 1300 bhodhi ine isina waya kutaurirana yakanamatira kune bhodhi dhizaini MKR Zero Bhodhindiko kuti, tichava nerutsigiro rwema32-bit application. Iyo ndiro ndiro 256KB ye flash memory uye 32KB SRAM. Inogona kumhanya pasimba re maviri 1,5V mabhatiri uye zvese zviri muhukuru hwe67,64 x 25mm. Nekuita nekutaurirana pasina waya, chishandiso chaunobatanidza chinowana mukana wekutaurirana kuInternet.
Iyo Arduino MKR GSM 1400 bhodhi ndiyo sarudzo inotevera nzira yemazhinji mapurojekiti eIoT. Ndiro iyi, sekureva kwayo chirevo, ine module yeGMM iyo inobvumidza kure kure kubatana pasina kudikanwa kweiyo router, chete nefoni sim kadhi. Dhizaini yezvimwe zvikamu zvebhodhi yakafanana neMKR Zero Board, asi simba rekushandisa harina kufanana neiro reMKR WAN 1300 bhodhi, iri pamusoro. Ndiro MKR GSM 1400 inoda ingangoita imwechete 3.7V LiPo bhatiri kuti ishande nemazvo. Uku kuwedzerwa kwesimba kuri kukonzerwa nemu module weGMM uyo une bhodhi, asi izvi hazvireve kuti kuwedzera saizi, iine saizi yakafanana neyaMKR WAN 1300 bhodhi.
Aya maviri maviri mamodheru emabhodhi eArduino anogona kuchengeterwa kutengwa kuburikidza neyepamutemo Arduino webhusaiti. Iyo MKR WAN 1300 bhodhi ine mutengo we 35 euros nepo MKR GSM 1400 bhodhi ine mutengo we59,90 euros. Mitengo miviri inonzwisisika kana tikatarisa mhando yemahwendefa nenharaunda huru ine chirongwa ichi. Saka zvinoita sekunge Arduino achiri kurwira kugadzirwa kwenzvimbo yemahara yeIoT. Zvisinei Mabhodhi aya achave nekubudirira kwakafanana naArduino Yún? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Arduino MKR WAN 1300 uye Arduino MKR GSM 1400, iwo mabhodhi matsva eIOT kubva kuArduino Project
NanoDimension inopa iyo nyowani DragonFly 2020 Pro
MaDrones anokwanisa zvino kufamba murima nekuda kwekushandisa kwemaumbirwo eriso